हकप्रद निष्कासनको प्रस्तावसहित जनरल इन्स्योरेन्सले बोलायो साधारण सभा - Aarthiknews
काठमाडौं । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले जेठ ३१ गते चौंथो वार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेको छ । कम्नपीको जेठ ६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले अमृतभोग, कालिकास्थान, काठमाडौंमा विहान ११ बजे सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सभाले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदन सहितका वित्तीय विवरणहरु पारित गर्नुका साथै ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने विषयलाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । कम्पनीको जेठ ६ गतेकै सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजीको आधारमा ३० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब रहेको छ । आगामी एक वर्षभित्र बीमा कम्पनीको निर्देशन बमोजिम कम्पनीलाई रू. २ अर्ब ५० करोड चुक्तापूँजी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । पूँजी बृद्धि अभियान चलिरहेको अवस्थामा पूँजीबृद्धिका लागि कतिपय कम्पनीहरुले मर्जरको प्रकृया अघि बढाईसकेको अवस्थामा यस कम्पनीले पनि मर्जर तथा प्राप्ती प्रकृयामा जाने संकेत गरेको छ ।
आगामी दिनमा सो प्रकृयामा जान आवश्यक देखिएमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय पनि सभाले गर्नेछ । सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले जेठ १९ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बुक क्लोजको आधारमा जेठ १८ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरू मात्र सभामा भाग लिन पाउनेछ् । साधारण सभाको लागि हकप्रदको प्रस्ताव रहेपनि बुक क्लोजको मिति भने हकप्रदको हकमा लागू हुने छैन् । वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग स्वीकृति लिएपछि मात्र हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि बुक क्लोजको मिति तय गर्नेछ ।
राप्ती हाइड्रोको आईपीओ स्थानीयमा बाँडफाँट, ३७ हजार ६२३ कित्ता विक्री हुन सकेन
प्रभु बैंकको ५० हजार कित्ता संस्थापक शेयर विक्रीमा
जीवन विकास लघुवित्तको ७० प्रतिशत बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
नेप्सेको कारोबार प्रणालीबाट एओएन फिचर हट्दै
नेप्सेमा ८.८७ अंकको गिरावट, एक अर्ब ४५ करोडको कारोबार